တရုတ်နိုင်ငံတွင်အန္တိခရစ်ထိန်းချုပ်မ | Apg29
တရုတ်အတွက်အဖြစ်မှန်ဖြစ်ကောင်းအများဆုံးသွင်းကြဘူးနိုင်ပါတယ်ယခုရှိပါသည် - ကဖြစ်ကောင်းဘယ်သူမှစိတ်ကူးနိုင်ခဲ့တဲ့ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့တကယ်ယခုအခါတရုတ်နှင့်အတူအသက်ရှင်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေနေကြသည်သောဤထိန်းချုပ်မှုစနစ်, နေဖြင့်အံ့အားသင့်ခြင်းမသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာဿုံပရောဖက်ပြုစကားလုံးကိုသတိပေးချက်အားပေးတော်မူပြီသောပုံရိပ်နှင့်အတူ၌တည်ရှိ၏။
ဒီအယူအဆတခုရဖို့ပဲကျနော်တို့ကဒီမှာအတွက်ထားသောရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပါ။ နှစ်ခုပုံရိပ်တွေမျက်နှာပြင်များမှာ7အောက်တိုဘာလအပေါ်ထုတ်လွှင့်ထားတဲ့အပေါ်ကိုအခြေခံပြီး SVT ရဲ့စာရွက်စာတမ်းထံမှ dumps ။
အဘယ်သူမျှမလွတ်မြောက် - SVT ရဲ့အစီအစဉ်၏အဆုံးမှာထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကသူတို့က, ဆိုင်ကယ်လမ်းလျှောက်သို့မဟုတ်တစ်ကားကိုမောင်းဖြစ်စေ, ဤအရာအလုံးစုံတရုတ်ကလူဖမ်းယူဘယ်လိုသရုပ်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါစနစ်အားပြီးသားကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်တယ်, အကြောင်းနှစ်တွင်တရုတ်နိုင်ငံ၏ကြီးမားသောလူဦးရေဖြစ်လိမ့်မည် 600 သန်းအထိနီးကပ်နေဖြင့်စောင့်ကြည့်နေသည် (!) ကင်မရာများကို။
တရုတ်လူမှုရေးအကြွေးဒီစနစ်ကြောင့်ခက်ခဲချို့တဲ့တစ်ခုတည်းခြေလှမ်းယူနိုငျရနျအတှကျအောင်နေချိန်တွင်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ငံသားများ, မိုဃ်းကောင်းကင်၌လွတ်လပ်စွာလှည့်လည်ခွင့်ပြုရန်လိမ့်မည်ဟုရေးသားခဲ့သည်။ သူတို့ကလုံးဝလူ့အဖွဲ့အစည်းမှဖယ်ထုတ်လိုက်နိုင်ပါသည်။
အခုဆိုရင်ကမ္ဘာ့မီဒီယာတရုတ်တွင်အဘယ်အရာဖြစ်ပျက်များအတွက်နှိုးထတော့တာပဲ။ အောက်တိုဘာလအတွက်အမျိုးမျိုးသောသတင်းစာများထုတ်ဝေနေတဲ့ဆွီဒင် TT ဆောင်းပါးအတွက်, သင်တရုတ်လူဦးယခုနှင့်အတူအသက်ရှင်များ၏လက်တွေ့ဘဝနှင့်ပတ်သက်ပြီးရေးလိုက်:
"မကျြနှာကိုအသိအမှတ်ပြုမှု, ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုများနှင့်စီးပွားရေးအပြုအမူပေါင်းစပ်၏နာရီစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုက Round ။ , အစစ်အမှန်အချိန်အတွက် updated နှင့်တစ်ဦးချင်းစီနဲ့သူ့မိသားစုများအတွက်အလွန်အရေးပါသည်သောရမှတ်တက် algorithms အသုံးပြုခြင်းနှင့်လူ့်ရောက်စွက်ဖက် count ကတစ်ဦးချင်းစီရဲ့လူမှုရေးအကြွေးတန်ဖိုး။ "
နောက်တဖန်ဒီဖတ်ရှုပါ! ဒါဟာကျနော်တို့မှပြန်ပြောပြရှိသည်သောအဖြစ်မှန်အတွက်ယူရန်ခက်ခဲစေနိုင်ပါတယ်။ ဤတွင်နာရီဝန်းကျင်စောင့်ကြည့်ခံနေရအကြောင်းကိုပြီးတော့စကားပြောရှိပါ!
ထို့အပြင်ခုနှစ်, အားလုံးသောအချက်များစနစ်, တှငျမှတျတမျးတငျထားသက "တစ်ဦးချင်းစီနဲ့သူ့မိသားစုများအတွက်အလွန်အရေးပါ။ " ဒီမသာတစ်ဦးချင်းစီအပေါ်သက်ရောက်မှုကိုဆိုလိုသည်, ဒါပေမယ့်လည်းမိသားစုတစ်စုလုံး။
တရုတ်တှငျနထေိုငျခဲ့သူတစ်ဦးကလူတစ်ဦးကကျယ်ပြန့်တဲ့အထူးဟာ့ဒ်ဝဲအားလုံးတရုတ်ဖုန်းများအတွက်ဖြည့်စွက်ကြောင်းလူသိများသည်ကသတင်းပို့သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်, အာဏာပိုင်များကိုသင်ဖုန်းပေါ်မှာစကားပြောသည့်အခါသငျသညျဆိုသညျကားအဘယျသို့နားထောငျကွ။
ကြောင်းအပြင်, အာဏာပိုင်များကိုလည်းနိုင်ငံသားများ၏အသံကိုကျွန်တော်နမူနာမှတ်တမ်းတင်ဖို့စတင်ပါပြီ။ ထို့ကြောင့်တဦးတည်းကိုနားထောငျတဲ့အခါမှာစကားပြောသူကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်နိုင်စေသည်။
ရှုထောခရစ်ယာန်တစ်ဦးပွိုင့်ကနေ, ကခရစျယာအဘို့ဤထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူအသက်ရှင်ဖို့ပြီးသားအလွန်ခက်ခဲဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်စစ်အစိုးရကိုသစ္စာစောင့်သိနိုင်ငံသားတွေရဖို့ရန်အာဏာ၎င်းတို့၏စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းအတွက်, ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းပင်ပိတ်ပင်ထားနိုင်ပါတယ်အပေါ်ထို့နောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့နောက်ထိုအရပ်၌အာဏာပိုင်များလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာကနေသူတို့အားလုံးကိုဖယ်ထုတ်ရန်အဘို့အဘယ်သူမျှမကပြဿနာဖြစ်နှင့်ထိုသို့မဖြစ်နိုင်တဲ့သာမန်ဘဝအသက်ရှင်ရန်စေသည်ပါလိမ့်မယ်။
ဗျာဒိတ်ကျမ်း 13 မျြးအခနျးကွီးရဲ့နိဂုံးချုပ်မှာဖော်ပြထားတဲ့ဝယ်ရောင်းရလတံ့သောကျော်ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုဆန့်ကျင်ခရစ်ယာန်စနစ်, တစ်အဖြစ်မှန်ဖြစ်လာသည်။
မည်သူမဆိုဤအစဉ်အဆက်အကောင်အထည်ဖော်မည်ဖြစ်ကြောင်းသို့မဟုတ်အရင်းအမြစ်များကိုဒီအခိုက်မှာယခုအောင်မြင်ရန်ရရှိနိုင်ဖြစ်ကြောင်းဆိုသံသယရှိပါကယခုသူတို့ရဲ့သံသယ drop နိုင်ပါတယ်။ အခုတော့နိုးနှင့်သမ္မာကျမ်းစာပရောဖက်ပြုငြင်းပယ်ရပ်တန့်ဖို့အချိန်ပါပဲ။
ပို. ပင်သက်ဆိုင်ရာအားလုံးခရစ်ယာန်တွေကိုကျနော်တို့ကမျြးစာတှငျတှေ့ရသောပရောဖကျတို့၏ဖော်ပြချက်များပွညျ့စုံအတွက်လာကြပြီဘယ်လောက်ဝေးသတိထားဖြစ်လာကြပြီနိုင်အောင်, ဆုံးမသြဝါဒနှင့်ဤအကြောင်းဟောပြော start ရန်ဖြစ်ပါသည်။
အခုတော့လောကမီဒီယာပြီးသားတည်ရှိခြင်းနှင့်လျှောက်ထားဘာအတည်ပြုကြောင်း, ကမျြးစာစကားလုံးယုံကြည်စိတ်ချရအကြောင်းကိုခရစ်ယာန်နှင့် Non-ခရစ်ယာန်တွေဟာနှစ်ဦးစလုံးစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်ခက်ခဲဖြစ်သင့်ပါဘူး။
Vecka 16, fredag 19 april 2019 kl. 12:43